ကမ္ဘာမြေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်၏အောက်မှာ Installed ကင်မရာ - သတင်း Rule
ကမ္ဘာမြေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်၏အောက်မှာ Installed ကင်မရာ
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အင်တာနက်တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မည်သည့်ရေကန် Baikal ၏အောက်ဆုံးအပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုကင်မရာကို install လုပ်ခဲ့ကြ. စိတ်ဝင်စားသောသူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်၌အသက်စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်, တစ်တုန်လှုပ်စေသောသော၏အမြင့်ဆုံးအနက် 1,642 မီတာ (5,287 ခြေရင်း။), ၎င်း၏ယုတ်အနက်နေစဉ် 744 မီတာ (2,440 ခြေရင်း).
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များအိုင်ရေခဲများနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်ရှေ့တော်၌ထိုကင်မရာများတပ်ဆင်ရန်အချိန်အတွက်တယ်. အဆိုပါစီမံကိန်းသည်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာတစ်ပင်ကြီးမြတ်အနက်မှာဒုတိယကကင်မရာကို install ဆိုလို. ကျော်တစ်ဦးစုစုပေါင်း 15 ကင်မရာများအိုင်ရဲ့ရေအောက်ဘဝဖြင့်ခံရဖို့စီစဉ်ထားကြသည်.
19272	0 Facebook က, လက်နက်စည်းမျဉ်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်အသွားအလာ, Irkutsk, အင်းအိုင်, ရေကန် Baikal, ရုရှားက, ဆိုက်ဘေးရီးယား, Soundcheck, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြေးနန်းအေဂျင်စီ, ရေအောက်